WAXAY NOLOSHU I BARTAY ?????? QAYBTII 3 AAD | Toggaherer's Blog
« Codkaaga ku Ciil Bax qaybtii 7aad…Sanad ka Hor Bal Dib u Akhri Waxii Taagnaa….Ahmed Arwo
WAXAY NOLOSHU I BARTAY ?????? QAYBTII 3 AAD
+ Waxaan ogaaday
Inaad qof jeclaataa inay u dhacdo si aan kutalo gal ahayn,laakiin inaad jacaylkaas sii wadaa uu adiga kugu xidhanyahay.
+ Waxaan ogaaday inaad madax noqoto ay ka qiimo badantahay adiga oo sharaf yeesha.
+ Waxaan ogaaday in wadada ugu gaaban ee guushu ay tahay samir,dulqaad iyo dadaal joogto ah.
+ Waxaan ogaaday in furaha guuldaradu yahay adiga oo isku daya inaad qofkasta raali galiso.
+ Waxaan ogaaday in qishku aanu ahayn shay wanaagsan,qofka imtixaanka qish kaaga sareeyaana aanu wax horumara gaadhin,ee ay ka qiimo badantahay dhibcaha aad hesho adiga oo aan qishin.
+ Waxaan ogaaday in midkasta oo garashada la saaxiib ahi uu yahay qof dagan oo warwaka aduunka ka xaroobay,midkasta oo aan garaso lahayni uu warwar iyo walbahaar noloshiisa ku dhamaysto.
+ Waxaan ogaaday in markasta oo aad wax sax ah samayso dadka in badani kula yaabi doonaan in yarna ku amaani doonto
+ Waxaan ogaaday in alle oo loo mahadnaqaa ay tahay shay aad uqaaliya
+ Waxaan ogaaday in aanan aduunkan isku wareerin waayo waxaan ogahay in gabagabadiisa tahay geeri,midkasta oo dadka kula colaatamaana aduunyana uu yahay jaahil.
+ Waxaan ogaaday in jacaylku yahay salaan kaasoo la koro markasta oo nolosha wax laga badalayo,laakiin uu salaankaas ka gudbo midkasta oo sabir iyo dulqaad lihi.
+ Waxaan ogaaday in aanan isku dawakhin aduunyo ee aan ku qanacsanaado qaybta igu soo hagaagta maalinkasta,waayo nolosha farxad kama gaadho midkasta oo isku daya inuu wax badan urursado.
+ Waxaan ogaaday in noloshu tahay saacado,uu dadkana ugu nasiib badanyahay midka saacadahaas ku dhamaysta farxad iyo badhaadhe.
+ Waxaan ogaaday in wakhtigu yahay mid cararaya midkasta oo aan garan qiimahawakhtiguna uu ka dhacay nolosha.
+ Waxaan ogaaday in dhibkasta oo ku haysata aanad dadka u wada bandhigin waayo 20% ma care garaynayaan,80% way ku faraxayaan arintaa kugu dhacday,markaa adigu xali oo noqo mid dhibaatadiisa isagu xalista.
+ Waxaan ogaaday markasta oo ay noloshu ku tusto1000 dhibaato oo ad adag,in aad tusto 1000 sababood oo aad ku farxi karto.
+ Waxaan ogaday in khaladku marka la galo uu aad u xanuun badanyahay,laakin sanaddo ka bacdi uu noqdo waxa loo yaqaan khibrad (Experience)ee lagu faano.
+ Waxaan ogaaday in midkasta oo jaahili uu ku dadaalo barashada qabiilka iyo ku dhaqankiisaba,dadkana uu kula doodo qabiilka.
+ Waxaa ogaaday inaad xusuusnaato wixii ku soo maray,inaad qorshayso mustaqbalkaaga,laakin aad awooda saarto maalintaad taagantahay,maxaa yeelay shalay waa maalin ku dhaaftay,barina waxay la iman doonto ma ogid,markaa ka faaidayso maanta.
+ Waxaan ogaaday in hadii ay maantu kuu wanaagsantahay aanad waxba uga baahnayn barito.
+ Waxaan ogaaday in qofkasta oo wax dhagaystaa uu ka cilmo bato ka in badan hadla ee ku hadla khayr iyo sharba.
+ Waxaan ogaaday in saaxiibka dhabtaa ay adagtahay sida loo helaa,adagtahayna sida looga tagaa,sidoo kalena aanay suuro gal ahayn in la ilaawaa.
+ Waxaan ogaaday hadii aad aduunka ku hesho saaxiib dhaba oo khayrka ku xasuusiya inaad aanad aduunkan wax kale uga baahnayn
+ Waxaan ogaaday in saaxiibka dhabti ahi uu yahay ka aad marka aad saacado badan wada joogtaan idinka oo aan isla hadlin aad raaxo dareento.
+ Waxaan ogaaday in aad la kulanto maalinkasta dad badan oo ku ilaawaya,sidoo kale aad barato dad badan oo aad adigu ilaawayso,laakin mararka qaarkood aad la kulanto dadka qaar aanad ilaawayn noloshaada,kuwaasina waa saaxiibada.
+ Waxaan ogaaday hadii aanad garanayn nolosha hadafka aad ka leedahay,in wado kasta oo aad qaadaa ay kuu hoogaamin doonto halkay ku dhamaato.
+ Waxaan ogaaday in dumarka yaqaanaan kuwo jecel iyo kuwa kale sida uu ninka kaluumaystaa u kala yaqaano malintay baddu kacsantahay iyomaalinta kale.
+ Waxaan ogaaday in aanu faraq xoogi u dhaxay ninka caqliga badan iyo ka doqonka marka uu jacyl ku dhaco
+ Waxaan ogaaday in muranka jacaylka ka dhashaa uu horseedo kalsooni iyo isku niyad sami waa marka xal loo helo murankee.
Diyaarintii:C/FATAAH SH.NUUH JAMAC (DABSHID)